Nzvimbo dzenzvimbo dzeColombia, mangani aripo? | Absolut Kufamba
Susana Maria Urbano Mateos | | Korombiya
Pamutemo inozivikanwa seRepublic of Colombia, Colombia inyika inogona kuwanikwa kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSouth America. Iine ayo anopfuura makiromita chiuru nemazana matanhatu enharaunda yemahombekombe yakashambidzwa nemakungwa eCaribbean uye ayo makiromita mazana matatu negungwa rePacific Ocean, tinowana akati wandei nzvimbo dzenharaunda dzeColombia.
Isu tinofanirwa kufunga kuti tizive kuti sei Colombia ichizivikanwa, pamusoro pezvose, yayo dzakasiyana siyana nemiti nemhuka mumatunhu ayo akasiyana siyana, ayo akaenzana neFrance zvakapetwa kaviri, kusanganisira inozivikanwa zvitsuwa zveProvidencia neSan Andrés.
1 Matunhu mangani ane Colombia?
2 Iwo mashanu enharaunda enharaunda eColombia
2.1 Gungwa reCaribbean
2.2 Pacific gungwa
2.3 Dunhu reAndes
2.4 Dunhu reEastern Plains
2.5 Iyo amazon dunhu
Matunhu mangani ane Colombia?
Colombia iri mune yakasarudzika mamiriro enzvimbo: iri mune inozivikanwa se altiplano (bani-rakakura renzvimbo pakakwirira pakakwirira) kuchamhembe kweAndes. Munzvimbo ino ndipo patinogona kuwana Bogotá, guta guru renyika ino inoshamisa uye uko vazhinji vevagari vemo vakaunganidzwa.
Munharaunda dzenzvimbo dzeColombia tinogona kuwana misiyano yakasiyana senge, semuenzaniso, marefu akakwidzwa nesinou emakomo epakati pemakomo ari pamusoro pemasango akazara nemiti yemuno. Pane rimwe divi, iyo inonyanya kugadzirwa nzvimbo dzekumaruwa, uko huwandu hwevanhu hwairima kofi yavo uye zviyo zvechibage, vaive munzvimbo dzepakati nepakati.
Tinosangana nenyika ne pakakura vanhu vanotaura chiSpanish muSouth America, ine huwandu hwevanhu hunogovaniswa mukuwedzera kwayo mumatunhu mashanu akasiyana, iwo akanakisa maguta.
Nekudaro, iwo mashanu enharaunda matunhu eColombia ari: gungwa reCaribbean, gungwa rePacific, dunhu reAndes, dunhu reEastern Plains nedunhu reAmazon. Mune chimwe nechimwe chazvo tinogona kuwana akasiyana uye akasarudzika zviitiko izvo zvichatibatsira kuti tinzwisise akakosha ematunhu enharaunda.
Iwo mashanu enharaunda enharaunda eColombia
Pazasi iwe une rondedzero uye tsananguro ine yakakosha hunhu yeumwe neumwe weiyo nzvimbo dzenharaunda dzeColombia.
Nzvimbo yemahombekombe uye savanna iyo inowanikwa mukati medunhu renharaunda ino, pakati pemitsipa yeAndes iyo yakawanda kune iyo kuchamhembe uye macaribbean, yakapoteredzwa zvinyoronyoro nehunhu hwemashiripiti. Pano hatizokwanisi kuwana makomo marefu anopfuura mazana matatu emamita pamusoro pegungwa, kunze kweiyo Sierra Nevada yeSanta Marta.
Iyi dunhu rizere nehova, matope (nzizi), nzizi, migero nemapani ane saizi uye zvimiro zvinosiyana zvinoramba zvichingoitika Kana tikashanyira dunhu rino, tinogona kutora mukana wemamiriro ekunze anodziya anoita kuti ivhu riite gwenga munzvimbo huru yepeninsula "La Guajira".
Munharaunda iyi yeCaribbean tinowana maguta anozivikanwa senge Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés Island uye Antigua Providencia, pamwe nemakiyi akati wandei uye zviwi zviri chikamu chenharaunda yeCaribbean yenyika ino. Unoziva zvakasara zve Zvitsuwa zveColombia?
Munharaunda ino, chinonyanya kukwezva kutarisa kwedu ndeichi sango regungwa rakakomberedzwa nemangrove, neimwe yemamiriro ekunze emvura yakasimba kwazvo munyika yeColombia. Inotora nzvimbo yakakura yenyika, pakati pe miganhu yePanama neColombia kufamba nyika kumaodzanyemba kuEcuador.
Inzvimbo yakasarudzika, inobvumidza zvisikwa zvegungwa nesango rinonakidza, iro ratingawana pano, kuva rakasimba. Munharaunda ino tinogona kuwana matunhu anozivikanwa nezita rekuti Chocó, Cauca, Valle uye Nariño.
Inzvimbo ine vanhu vane runyararo ine guta rimwe chete rine hupfumi. Buenaventura. Heino inonyanya kukosha chiteshi chengarava munyika, uko kwakawanda kutengeswa uye kutengeswa kunoitwa munzvimbo yePacific.
Tinogona zvakare kuwana imwe chiteshi mu Tumaco Coast, mudunhu reNariño, kubva kwatinoona iyo zviwi zveMalpelo, Gorgonilla neGorgona, iyo zvakare iri yenharaunda ino yenyika yeColombia.
Mune izvi Dunhu reColombia Ndipo patichawana huwandu hwevanhu uye, zvakare, huwandu hwenzvimbo yemakomo iri yeAndes, nekudaro zita renharaunda ino. Ndizvo nharaunda inofukidza nharaunda nhatu dzemakomo, kusvika padanho repamusoro rekusimudzira magariro pamwe nehupfumi kunyangwe iri munzvimbo ine makomo kudaro.
Munharaunda ino tinowana maguta makuru enyika, kusanganisira iyo guta guru Bogotá, shanduko inoshanduka mukusimudzira pamatanho mazhinji enyika yeColombia. Kunyangwe tiri munzvimbo ine makomo, tinogona kuwana nzvimbo dzakasiyana mukati mekuzivikanwa "Cocuy National Park", Kwatinogona kuita zviitiko zvakasiyana senge zvekare uye nzira dzemitambo, senge kayaking, caving, nezvimwe.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, pano tinokusiya iwe ne chaiwo madhishi enharaunda yeAndes.
Dunhu reEastern Plains
Izvi "Mapani ekuMabvazuva”Ndiwo mapani eColombia neVenezuela, ayo anoumba savanna dzeRwizi rweOrinoco. Munharaunda ino tinogona kuwana iyo nyika dzeArauca, Casanare, Vichada neMeta. Chinhu chinowanikwa nevanhu vazhinji mumapani aya idiki yavo, vazhinji vacho vanogara mu Kumabvazuva Cordillera.
Aya mabani akawana kufarira kukuru, munguva dzichangopfuura, nekuda kweminda yemafuta yakawanikwa mu Arauca neCasanare nzvimbo. Iyi minda yakakwezva vagadziri vatsva munzvimbo ino nechinangwa chekuishandisa uye nekuwedzera hupfumi hwayo.
Tinogona zvakare kuwana iro guta rakanzi "musuwo wepamberi”Kumapani aya munzvimbo yeColombia, guta reVillavicencio, rinova iro guta guru redunhu reMeta. Tinogona zvakare kuwana maguta senge Acacías naVillanueva, umo matinogona kuita zviitiko zvakasiyana zvinotisanganisa nemasikirwo uye zvinokurudzira kutandara uye kudimburwa.
Iyo amazon dunhu
Ndiyo imwe yenzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa dzeColombia pasi rese uye kwete chete kwenzvimbo yayo hombe, iri yakakura kupfuura dunhu reiyo Mapani ekuMabvazuva uye dunhu rine vanhu vashoma pane vese, asi kune zvese zvipenyu nemiti zvatinowana mairi.
Takatarisana ne dunhu remakiromita anopfuura mazana maviri ezviuru, umo matinogona kuwana nzanga dzinoverengeka dzemunharaunda dzinowanikwa pedyo nenzizi dzese dzinoyambuka sango reAmazon kubva kumusoro kusvika pasi. Inovhara iyo nyika dzeCaquetá, Putumayo, Guanía uye Amazonas, pakati pevamwe, uko vanogara munzvimbo dzekupedzisira vanoumba huwandu hwenzvimbo ino.
Mamiriro ekunze ayo anogara aripo mukati megore rose: kupisa kunodzivirira kutengeserana uye zvipfuyo zvekurima, nepo hunyoro nemvura zvichikwirira mumwedzi yese yegore. Munharaunda ino tichawana a guta rinonzi "Leticia", iyo inozadzisa mabasa maviri: kuve iro guta guru renyika yeAmazonas uye, zvakare, kuve nechiteshi paRwizi rweAmazon rine chiitiko chepamusoro.
Iri guta reColombia, zvisinei nehukuru hwayo hushoma, ine huwandu hwevanhu vangangoita 37.000 vagari, uye kwete chete hwenyika yeColombia. Iyi nharaunda ndiyo nzvimbo inozivikanwa se "Matatu Border", Inzvimbo iyo Colombia, Brazil nePeru vanosangana.
Munzvimbo ino, hupfumi hwaLeticia hunosanganisira kuve nzvimbo yekutenga nekutengesa, nekuda kwechiteshi chayo, kwehove dzese dzinopisa dzinobatwa munzvimbo iyi uye dzinoshanda senzira yekupinda munyika nekondinendi yehove idzi.
Munharaunda yeAmazon iwe unogona zvakare kuwana akasiyana mahedheni ekugara mukati memigwagwa yakasiyana, makoroni akadai seAngostura kana mukati meNational Park pachayo. Chiribiquete, ine nzvimbo yakakura zvekuti hapana munhu anokuvimbisa nezvemhando dzese dzemiti nemhuka zvaunogona kuwana mairi.
Iwe unotoziva here izvo nzvimbo dzenharaunda dzeColombia? Ndeupi waunosarudza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Geographic nzvimbo dzeColombia
MARIA ESTHER RICO akadaro
Munharaunda yeAndes ndiNevado del Cocuy, mukati memakore makumi maviri apfuura yarasikirwa neanosvika makumi mana muzana echando nekuda kwekudziya kwepasirese, iri nyoro inotyisa dunhu, saizvozvowo Tota lagoon yanga ichioma nekuda kwemaindasitiri.
Pindura kuna MARIA ESTHER RICO
Iri peji rinoita serakanaka kwandiri sezvo isu tichigona kudzidza nezve ese matunhu enharaunda eColombia uko kwavanoratidza zvimwe zvinhu nekuburitsa maakaundi esainzi ayo akafambira mberi zvakanyanya munharaunda inoshungurudza yepasi.
Pindura kuna daniel347
Ruzivo rwacho rwakanyanya kunaka asi haruna nzvimbo dzevanhu
Ndinokumbira chichi tsvina akadaro
Pindura kuna pedito caca chichi
Sofea kwete kunyangwe dai yaive yavakandiera 4.0 havana kundiyera 1.0 iwo boi aser popo pane yavo peji
Ini ndoda kuisa mepu yematunhu asi zvikasadaro zvaive zvakanaka
ana maria campo akadaro
Chinhu chakanyanya kushata pamusoro peiyo pajiana isoooo guacatelaa hahaha, ichokwadi, haitauri chero chinhu nezveColombia.
Pindura kuna ana maria campo
maria camila garzon gil akadaro
ndinokutendai nekugadzira matunhu aya kubatsira hama dzangu kukutendai
Pindura kuna maria camila garzon gil
ona kana iwe uchida chinyorwa chevana chembira:
heilen paola akadaro
Ndatenda zvikuru nekutenda kune ino peji ndakakwanisa kuwana zvandanga ndichida, maita nerubatsiro rwatinopihwa neino peji
Pindura kuna heilen paola
colombia inoshamisa …… ♥
Pindura kuna juanka
inokanganisa zvisizvo avo vanoti peji iri rakashata ndinofungidzira ivo bato rematoto
Pindura kuna edwin
maría jose herrera RODRIGUEZ akadaro
kuvonga nekutidzidzisa izvo
Pindura kuna maría jose herrera RODRIGUEZ
Imbwa nekatsi akadaro
Zvakanaka, ndainakidzwa nazvo, maita basa
Pindura kumakati nembwa
Pindura kuna jhon-tk-@hotmail.com
Charles Albert akadaro
Cinthiya ari vova kana anoziva zvaakanyora: (
Pindura Carlos Alberto
Iyi yakanaka yakanaka ine zvandinoda
Zvakanaka chaizvo munhu anowana zvakanaka.zvinhu.uye sekududzirwa kwese kwenzvimbo.
valeria cano medina akadaro
Mhoro, wakadii uri kuitei
Pindura valeria cano medina
angela brochero akadaro
INCREDIBLE ZVESE ZVATINOGONA KUZIVA APA
Pindura kuna angela brochero
Japanese tatami: hunyanzvi hwekurara pasi